तिथि मेरो पत्रु » के तपाईं प्यार मा हो कसरी थाह?
म प्रेममा फसे पहिलो पटक सम्झना. अनि म शायद सत्य तपाईं तुरन्त आफ्नो हृदयमा यो थाहा छ विचार. तपाईं ती सबै कुचल र तपाईं मान्छे को लागि थियो बलियो भावना र तपाईं यस एक व्यक्ति महसुस बाटो भिन्नता थाह. कि भन्दै मा, म तल उल्लेख गरेको छु जो केही कारणहरू गर्न तपाईं कसरी थाह तल फोडे.
तपाईं कसैलाई प्रेम गर्दा तपाईं आफ्नो सबैभन्दा कमजोर छन्. तपाईं तिनीहरूलाई खुसी पार्ने, उनलाई प्रभावित, तिनीहरूलाई खुसी बनाउन. तिनीहरूले तपाईं खोज्दै पहिलो एक हो उदाहरणका लागि आफ्नो वालेट गुमाउन भन्न. अनि यो ओह 'को यसरी छैन, कि गरीब व्यक्ति आफ्नो वालेट गुमाए।’ यो भन्दा गहिरो छ. तपाईं कुनै पनि खराब कुरा तिनीहरूलाई भइरहेको फलाउँदैन. तिनीहरू के खराब केहि को लागि एक व्यक्ति को पनि राम्रो हो. तिनीहरू के गर्न केहि बुरा योग्य छैन. तिनीहरूले तपाईं अस्तित्व थिएन लाग्यो कि भावना सम्म खोलिएको छ र यो तपाईं कहिल्यै कल्पना सक्थे भन्दा बढी सुन्दर छ. तपाईं उनि रुचि संगीत मा शुरू हो रही. तपाईं थाह कहिल्यै, यो सिर्फ एक कुराकानी सुरु हुन सक्छ. अनि यो unrequited छ भने, त्यसैले यो हुन. तपाईं तिनीहरूलाई कस्तो महसुस तपाईं तरिकाबाट प्राप्त आनन्द घाइते कुनै अधिरोहण (वा निकट पागलपन!) तपाईं तिनीहरूलाई हुन सक्दैन किनभने तपाईं महसूस गर्दै छन् कि. त्यसैले मूलतः कमजोर भएको र तिनीहरूलाई बारेमा सबै कुरा मा गुमाए शायद मुख्य तपाईं थाह चाहन्छु तरिका र तपाईं तिनीहरूलाई संग हुन सबै आफ्नो सपना परित्याग भनेर थाह छ. म म थाह कसरी म धेरै महत्त्वाकांक्षी छु र म चाहनुहुन्छ अन्तिम कुरा जवान तल गाँसिएको गर्न छ किनभने शायद हो तर उहाँले मलाई फिर्ता चाहन्थे छन् चाहन्छु र उहाँले म उहाँलाई लागि हुनेछ समय मा थाहा बसोबास गर्न चाहन्थे भने विचार जो म हरेक मानिसको लागि त्यसो गरेनन् थाह.
लगातार उनलाई बारे मा कुरा
के तपाईं पनि मा कुचल छ मान्छे बारेमा यो छ किनभने यो एक मुश्किल छ तर यो पनि प्रेम मा भएको मा एक कारक हो. यो infatuated गरिएको विरोध गर्न तपाईं प्रेममा हुनुहुन्छ जब यो सूची मा अन्य पक्षहरू अलावा भन्ने बस छ. म संग प्रेम थियो मान्छे बारेमा मेरो बहिनीलाई धेरै कुरा सम्झना. म उसलाई भन्न थिएन तर त्यो थाह. उनले गरे स्वीकारे म बन्द-अप सक्दैनथ्यो उहाँले थियो कसरी अद्भुत पछि उमेर, कसरी हास्यास्पद उहाँले थियो, कसरी प्रकारको उहाँले थियो, उहाँले मलाई समावेश चाहन्छु कसरी, यो लजालु एक, कुराकानीमा.
ती धन्य भन्दा भएका तपाईं ध्यान देखाउँदै
हो, तपाईं कसैले तपाईंलाई ध्यान कुनै पनि प्रकारको देखाउने कल्पना तर तपाईं आफूले प्रेम यो भन्दा छ द्वारा धेरै खुसी प्राप्त गर्न सक्छन्. यो एक जडान जस्तै एक बिट महसुस. आफ्नो जीवन मा तिनीहरूले तपाईं कुरा! कुन एक बिट दुःखी सुनिन्छ तर तपाईं सिद्ध रूपमा देख्न किनभने तपाईं आफूले प्रेम आफूलाई जस्तै सिद्ध देख्न कहाँ स्वाभाविक हो. तिनीहरूले आफ्नो नाम उल्लेख गर्दा र यो एक गीतमा जस्तै सुनिन्छ. सबैभन्दा सुन्दर कुरा जस्तै तपाईं अहिलेसम्म सुनेका. म जडान यो एक सम्भव रोमान्टिक सम्बन्ध हुन तर यदि गर्न सक्छन् भन्न जब यो unrequited छ, यो मित्रताको सम्बन्ध हुन सक्छ. तिनीहरूले फिर्ता तपाईं प्रेम छैन भने कुरा छ तर तपाईं अझै पनि केही क्षमता मा आफ्नो जीवन मा उनलाई चाहनुहुन्छ र यो संसार मा स्वास्थ्यप्रद अवस्था हुनेछ कि बहस गर्न खुला छ तिनीहरूलाई प्रेम तर यो निश्चित रूप हो कसरी खेल काम मा मानव भावनाहरू.
आफ्नो कम्पनी मा हुन गहिरो तिर्सना छ र तपाईंले तिनीहरूलाई देख्न कहिल्यै सक्छ विचार गर्दा फेरि भित्र यस खाली भावना छ. यो साँच्चै दर्दनाक छ. त्यसपछि तपाईं केही पेय छ भने, यो बुरा हुन्छ. तपाईं रो सुरु. अनि तपाईं शायद एक क्रश मा जस्तै महसुस गरेनन्. यो आफ्नो जीवनमा उनलाई होने र आफ्नो जीवन जस्तै महसूस को एक खाली भावना कहिल्यै तिनीहरूलाई बिना पूर्ण हुन गइरहेको छ छ. यो एक आधा जीवन जस्तो. तपाईं कुनै कुरा छैन प्राप्त सबै. तर तपाईं कि माध्यम प्राप्त. यो एक लामो सडक छ तर तपाईं अन्य पक्ष बाहिर आउँछन्.